Dowladda UK oo hakadgalineysa Codsiyada Dadka megangalyadoonka ah. | Dayniiile.com-Latest news from around the world
Home Warkii Dowladda UK oo hakadgalineysa Codsiyada Dadka megangalyadoonka ah.
Dowladda UK oo hakadgalineysa Codsiyada Dadka megangalyadoonka ah.
Xukuumadda Ingiriiska ayaa ka baaraan degaysa in aanay dalkeeda soo gelin dadka magangelyo doonka ahi ilaa inta codsiyadooda go,aan laga gaadhayo.
Arintan ayaa qayb ka ah wax ka bedel ballaadhan oo lagu wado xeerarka socdaalka dalkaas ka dib markii Ingiriisku ka baxay Midowga Yurub.
London ayaa doonaysa in ay wax ka bedesho xeerarka socdaalka dadka tahriibka sharci darrada ah ku gala dalkaas ee isku daya in ay ka gudbaan badda English Channel ee u dhaxaysa Ingiriiska iyo Faransiiska iyaga oo doonaya in ay magangelyo helaan.
Wasiirka arimaha gudaha, Priti Patel, ayaa ku tilmaantay xeerarka socdaalka ee haatan jiraa in ay ka muuqato mushkilad asaasi ahi
Saddexdii bilood ee ugu horeeyey sannadkan ayaa in ka badan 650 qof ka gudbeen badda English Channel oo ay kaga tallaabeen doonyo yar yar oo ay ku gaadheen dhanka Ingiriiska, waana tiradii mudadaas oo kale sannadkii hore ka gudubtay laban laabkeed.
Wargeyska Times ee dalkaa ka soo baxa ayaa sheegay in xukuumaddu dersayso sidii ay goobo lagu qaabilo dadka muhaajiriinta ah uga furi lahayd dhulka Ingiriisku xukumo ee dalka dibadiisa ku yaal sida jasiiradda Gibraltar oo kale.
By C/wahaab Aadan C/raxmaan.
Previous articleDowlada Kenya oo war cusub ka soo saartay arimaha Dacwada Badda
Next articleKenya oo mar kale ku baaqday in wadahadal lagu dhameeyo Murunka Badda kala dhaxeeyo Soomaliya
Puntland oo DF ku eedeysay baaqashada shirkii beesha caalamka & dowlad...
Mohamed Abdullahi Mohamed - March 25, 2021 0
Maamulka Puntland ayaa ku eedeeyey madaxda DF iney ka dambeeyeen baaqashada shirkii ay galabta u balansanaayeen madaxda shanta dowlad goboleed iyo beesha caalamka, kaaso...
Dowladda Sudan oo baabi’say sharci diidayay jiritaanka Dowlada Israel ku...
Aqalka Wakiillada oo ansixiyay $1.9 trillion, taas oo uu madaxweyne Biden...
Ururka Taalibaan oo calankiisa ka taagay magaalo istaraatiiji ah oo ku...
Qarax masuul lala eegtay oo ka dhacay magaalada Muqdisho
Maxkamad ku taalla Jarmalka oo sarkaal horay uga tirsanaa sirdoonka Suuriya...
Suuq Wayn oo Nuuciisa horay loo arag laguna iibiyo geela oo...
Shiikh Shariif Shiikh Axmed oo dalbaday in lagu sheego dhallinyarada Soomaaliyeed...